14 Ɛbae sɛ da bi Saul ba Yonatan+ ka kyerɛɛ ne somfo a okura n’akode no sɛ: “Bra ma yentwa nkɔ Filistifo awɛmfo dɔm a wɔwɔ nohoa no mu.” Nanso wammɔ ne papa amanneɛ.+ 2 Ná Saul wɔ Gibea+ kurotia, granate akutu dua a esi Migron no ase, na nnipa a wɔka ne ho bɛyɛ mmarima ahansia.+ 3 (Yehowa sɔfo Eli+ a na ɔwɔ Silo+ ba Finehas+ ba Ikabod+ nua Ahitab+ ba Ahiya na na asɔfotade no wɔ ne nsam.)+ Ɔman no de, na wonnim sɛ Yonatan kɔ hɔ. 4 Na beae a na Yonatan pɛ sɛ ɔfa twa kɔ Filistifo awɛmfo dɔm+ so no, na ɔbotan a ɛte sɛ ɛsẽ wɔ ɔfã ha, na ɔbotan a ɛte sɛ ɛsẽ wɔ ɔfã ha nso; biako din de Boses, na biako nso din de Sene. 5 Ná ɛsẽ a ɛyɛ edum wɔ atifi fam no ani kyerɛ Mikmas,+ na biako a ɛwɔ anafo fam no nso ani kyerɛ Geba.+ 6 Na Yonatan ka kyerɛɛ ne somfo a okura n’akode no sɛ: “Bra ma yentwa nkɔ momonotofo+ yi awɛmfo dɔm no mu. Ebia Yehowa bedi ama yɛn efisɛ ɛnyɛ den mma Yehowa sɛ ɔnam pii anaa kakraa bi so begye nkwa.”+ 7 Ɛnna n’akodekurafo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛ nea ɛwɔ wo komam biara. Dan wo ho kɔ baabiara a wopɛ sɛ wokɔ. Meka wo ho nea wo koma pɛ biara mu.”+ 8 Na Yonatan kae sɛ: “Hwɛ, yɛretwa akɔ nkurɔfo no mu, na ma yenyi yɛn ho adi nkyerɛ wɔn. 9 Sɛ ɛba sɛ wɔka kyerɛ yɛn sɛ, ‘Munnyina hɔ nkosi sɛ yɛbɛba abɛto mo!’ a, ɛnde yebegyina faako a yɛwɔ, na yɛremforo nkɔ wɔn nkyɛn. 10 Na sɛ wɔka sɛ, ‘Momforo mmra yɛn so!’ a, ɛnde yɛbɛforo akɔ, efisɛ Yehowa de wɔn bɛhyɛ yɛn nsa; eyi na ɛbɛyɛ sɛnkyerɛnne ama yɛn.”+ 11 Ɛnna wɔn baanu no yii wɔn ho adi kyerɛɛ Filistifo awɛmfo dɔm no. Na Filistifo no kae sɛ: “Monhwɛ sɛ Hebrifo no refi adi fi ntokuru a wokohintaw mu+ no mu.” 12 Ɛnna awɛmfo dɔm no ka kyerɛɛ Yonatan ne n’akodekurafo no sɛ: “Momforo mmra yɛn so, na yɛbɛkyerɛ mo biribi!”+ Ɛhɔ ara na Yonatan ka kyerɛɛ n’akodekurafo no sɛ: “Foro di m’akyi, na Yehowa de wɔn bɛhyɛ Israel nsa.”+ 13 Na Yonatan de ne nsa ne ne nan foroe,+ na n’akodekurafo no dii n’akyi, na wɔtotɔe Yonatan anim,+ na n’akodekurafo no kunkum dii n’akyi.+ 14 Nnipa a Yonatan ne n’akodekurafo dii kan kunkum wɔn wɔ asase a ne kɛse te sɛ nantwi mpamho funtum kwan fã so no, wɔbɛyɛ mmarima aduonu. 15 Ɛnna ahopopo+ sii nsra no mu, wuram hɔ ne awɛmfo dɔm no nyinaa so, na afowfo+ dɔm no mpo ho popoe, na asase wosowee+ ma ɛdan ahopopo a efi Onyankopɔn hɔ.+ 16 Na Saul awɛmfo a wɔwɔ Benyaminfo kurow Gibea+ mu no hui, na hwɛ! nnipa no rehwete fa ha sen ha.+ 17 Ɛnna Saul ka kyerɛɛ wɔn a wɔka no ho no sɛ: “Monkan nnipa no na yenhu nea wafi yɛn mu kɔ.” Bere a wɔkan nnipa no, wohui sɛ Yonatan ne n’akodekurafo no nni hɔ. 18 Afei Saul ka kyerɛɛ Ahiya+ sɛ: “Fa nokware Nyankopɔn adaka no bɛn ha!”+ (Saa da no, na nokware Nyankopɔn adaka no wɔ Israelfo mu.)+ 19 Bere a Saul gu so ne ɔsɔfo+ no rekasa no nyinaa na Filistifo nsra mu kitikiti no rekɔ so, na emu yɛɛ den. Ɛnna Saul ka kyerɛɛ ɔsɔfo no sɛ: “Gyae.” 20 Na Saul ne wɔn a wɔka ne ho no nyinaa boaboaa wɔn ho ano.+ Bere a wokoduu akono hɔ no, na obiara atwe nkrante wɔ ne yɔnko so;+ nkogudi no yɛɛ kɛse paa. 21 Na Hebrifo a bere bi wɔkɔkaa Filistifo+ ho a wɔne wɔn foro baa nsra a atwa hɔ ahyia mu no, wɔn nso baa Israelfo a wɔka Saul ne Yonatan ho no afã. 22 Israel mmarima a wokohintaw+ Efraim mmepɔw so no nyinaa tee sɛ Filistifo no aguan, na wɔn nso tu sãã wɔn ne wɔn kɔkoe. 23 Na Yehowa gyee+ Israel ɛda no, na ɔko no kopuee Bet-Awen.+ 24 Saa da no, na Israel mmarima abrɛ, nanso Saul kaa ntam+ guu ɔman no so sɛ: “Ɔbarima a wantwɛn kosi sɛ mɛtɔ m’atamfo so were na obedidi ansa na onwini adwo no, nnome nka no!”+ Na ɔmanfo no mu biara amfa aduan anka n’ano.+ 25 Na ɔmanfo no nyinaa koduu kwae mu, na na ɛwo+ wɔ asase no so. 26 Bere a ɔmanfo no duu kwae no mu no, hwɛ! na ɛwo+ resosɔ, nanso obiara amfa ne nsa ankɔ n’ano efisɛ ɔman no suroo ntam+ no. 27 Yonatan de, bere a ne papa kaa ntam guu ɔman no so no, wante,+ enti ɔteɛɛ poma a ekura no no de ano kaa ɛwokyɛm, na ɔde ne nsa kɔɔ n’ano, na n’ani so daa hɔ.+ 28 Ɛnna nkurɔfo no biako kae sɛ: “Wo papa aka ntam agu ɔman no so sɛ, ‘Nnome nka obiara a obedidi nnɛ!’”+ (Na ɔman no brɛe.)+ 29 Na Yonatan kae sɛ: “Me papa de mmusu+ aba ɔman yi so. Monhwɛ, ɛwo kakra a mede kaa m’ano mpo ama m’ani so ada hɔ.+ 30 Sɛ ɔman yi dii+ asade a efi wɔn atamfo hɔ no bi nnɛ a, hwɛ nea anka ɛbɛba!+ Enti nso na Filistifo kum yi nyɛɛ kɛse no.”+ 31 Ɛda no, wɔbobɔɔ Filistifo fi Mikmas+ kosii Ayalon,+ na ɔman no brɛe+ yiye. 32 Na ɔman no tu guu asade no so+ faa nguan ne anantwi ne anantwi mma kunkum wɔn wɔ fam, na ɔman no dii nam no wɔn mogya mu.+ 33 Ɛnna wɔbɛka kyerɛɛ Saul sɛ: “Hwɛ! Ɔman no reyɛ Yehowa bɔne; wɔredi nam no wɔn mogya mu.”+ Na ɔkae sɛ: “Moanni nokware. Nea edi kan, mumpirew ɔbo kɛse mmrɛ me.” 34 Ɛno akyi no, Saul kae sɛ: “Munkyin ɔmanfo no so, na monka nkyerɛ wɔn sɛ, ‘Obiara mfa ne nantwi ne ne guan mmra me nkyɛn ha, na ommekum wɔ ha nni, na monnyɛ Yehowa bɔne nnni wɔ ne mogya mu.’”+ Ɛnna ɔmanfo no mu biara de ne nantwi a okura anadwo no bae, na obekum wɔ hɔ. 35 Na Saul sii afɔremuka+ maa Yehowa. Ɛno na ɔde fii ase sisii afɔremuka maa Yehowa.+ 36 Akyiri yi, Saul kae sɛ: “Momma yensian nkotiw Filistifo no anadwo yi na yɛnkɔfow wɔn nkosi sɛ ade bɛkye,+ na mommma yennnyaw wɔn mu onipa biako mpo.”+ Ɛnna wɔkae sɛ: “Nea eye w’ani so biara, yɛ.” Ɛnna ɔsɔfo no kae sɛ: “Momma yentwiw mmɛn nokware Nyankopɔn no wɔ ha.”+ 37 Enti Saul bisaa Onyankopɔn sɛ: “Minsian ntiw Filistifo no anaa?+ Wode wɔn bɛhyɛ Israel nsa?”+ Nanso wamma no mmuae saa da no.+ 38 Ɛnna Saul kae sɛ: “Ɔman no mu atitiriw+ nyinaa, muntwiw mmɛn+ ha, na yɛnhwehwɛ nea ɛyɛe a bɔne yi aba nnɛ. 39 Sɛ́ Yehowa, Israel Gyefo no te ase yi, sɛ efi me ba Yonatan mpo a, owu na obewu.”+ Nanso ɔman no muni biara amma no mmuae. 40 Afei ɔka kyerɛɛ Israel nyinaa sɛ: “Munnyina ɔfã biako, na me ne me ba Yonatan nso begyina ɔfã biako.” Ɛnna ɔman no ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Nea eye w’ani so no, yɛ.”+ 41 Na Saul ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “O Israel Nyankopɔn, fa Tumim*+ so ma nokware nna adi!” Enti ɛbɔɔ Yonatan ne Saul, na ɔman no fii mu fii.+ 42 Ɛnna Saul kae sɛ: “Mommɔ me ne me ba Yonatan so ntonto.”+ Na ɛbɔɔ Yonatan. 43 Afei Saul bisaa Yonatan sɛ: “Ka kyerɛ me, dɛn na woayɛ?”+ Enti Yonatan ka kyerɛɛ no sɛ: “Nokwasɛm ni, mede me nsam poma ano ɛwo kakra kaa m’ano.+ Mini! Momma minwu!” 44 Ɛnna Saul kae sɛ: “Yonatan, sɛ mamma woanwu+ a, Onyankopɔn ntua me ka na ɔmfa bi nka ho.”+ 45 Nanso ɔman no ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Yonatan a wayɛ ade kɛse de agye+ Israel sɛɛ yi na ɔrebewu? Ɛmpare yɛn!+ Sɛ́ Yehowa te ase yi,+ ne ti so nhwi biako mpo+ rentɔ fam, efisɛ Onyankopɔn na ɔde no ayɛ adwuma nnɛ.”+ Enti ɔman no gyee Yonatan nkwa,+ na wanwu. 46 Saul gyaee Filistifo no akyidi, na Filistifo no nso kɔɔ wɔn baabi.+ 47 Na Saul hyɛɛ n’ahenni mu den Israel so,+ na ɔne n’atamfo nyinaa ko hyiae—Moabfo+ ne Ammonfo+ ne Edomfo+ ne Soba+ ahene ne Filistifo.+ Baabiara a ɔkɔe nso, ɔtwee wɔn aso.+ 48 Ɔyɛɛ n’ade akokoduru so,+ na okunkum Amalekfo,+ na ogyee Israel fii afowfo nsam. 49 Saul mmabarima a ɔwoo wɔn ne Yonatan+ ne Yiswi ne Malki-Sua,+ na ne mmabea baanu no nso, na wɔfrɛ ɔpanyin no Merab+ na wɔfrɛ akumaa no Mikal.+ 50 Saul yere nso, wɔfrɛ no Ahinoam, Ahimahas ba, na ne sahene nso wɔfrɛ no Abner+ a ɔyɛ Saul papa nua Ner ba. 51 Saul papa ne Kis,+ na Abiel ba ne Abner papa Ner.+ 52 Saul nna nyinaa, ɔko no mu yɛɛ den Filistifo so.+ Sɛ Saul hu ɔbarima a ne ho yɛ den anaa ɔbarima kokodurufo biara a, ɔde no bata ne ho.+